Dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh ayaa ka socda magaalada Nairobi (Warbixin) – idalenews.com
Dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh ayaa ka socda magaalada Nairobi (Warbixin)
Dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed iyo guux ayaa ka socda magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasoo lagu tilmaamo meelaha ugu badan ee abaabulada siyaasadeed laga qorsheeyo, iyadoo dhowaanahan ay ku qul qulayeen siyaasiyiin, aqoonyahano iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamanka.
Nairobi ayaa 10-kii sano ee u dambeysay tan iyo markii dowladdii uu hogaaminayay C/llaahi Yuusuf lagu soo dhisay, waxay marjac u aheyd siyaasada Soomaaliya, halkaasoo ay saldhigyo ku leeyihiin Hey’adaha caalamiga iyo diblomaasiyiinta ku lugta leh siyaasada Soomaaliya.
Waxaa aad ugu badan qolooyin abaabulaya maamul goboleedyo cusub, sida kuwa qorshuhu yahay in loo sameeyo Gobolada Jubooyinka, Bay iyo Bakool, waxaana horboodaya shaqsiyaad si weyn uga dhex muuqday siyaasadihii wajiyada badnaa ee 10-kii sano Soomaaliya ku soo jirtay.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa u sheegay Jowhar.com in Nairobi ay ku sugan yihiin in ka badan 70-xildhibaano oo shirar gooni gooni ah iyo ujeedooyin siyaasadeed ka wada, waxaana shirarkan ay yihiin kuwo leh danooyin isku xiran.
Shirarkii ugu dambeeyay ayaa waxaa magaalada Nairobi ku yeeshay shaqsiyaadka horboodaya Ololaha maamul goboleedyada lagu dhisayo sida Gudoomiyihii hore ee Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo Axmed Madoobe, waxaana jiray kulamo ay isugu soo dhowaanayeen labada dhinac oo xurguf hoose u dhaxeysay, kaasoo ku saabsanaa dhismaha Maamul goboleed loo waday in ilaa lix gobol loo sameeyo, hase ahaatee laga heshiiyay khilaafaadyadaas, waxaana haatan ay wadaan Isbaheysi xoog leh oo ka dhan ah dowladda Soomaaliya, si hadii hadhow dowladdu ay diido qorshahooda ay iska wada kaashaadaan.
Sidoo kale waxaa Nairobi ku sugan xubno ka socda Puntland, kuwaasoo kulamo la lahaa Xafiiska Siyaasada UNPOS iyo Diblomaasiyiinta reer galbeedka kala hadlayay habka Federaalka oo ay sheegeen in dowladda xadgudubyo ku sameysay, arrimaha cunaqabateynta hubka oo ay ku tilmaameen mid hal dhinac dani ugu jirto, waxaana ay cilado gelinayaan aqoonsiga dowladda iyo awoodaha Madaxweynaha, iyagoo shaki gelinaya awooda Ra’iisul Wasaare Saacid.
Waxaa Nairobi ka socda shirar gogol xaar u ah shir la filamo inuu ka dhaco Nairobi ama Muqdisho, kaasoo ay wadaan ku dhowaan 20-ka xubnood ee ugu tunka weyn musharaxiintii u tartameysay xilka Madaxweynaha iyo kii Gudoomiyaha Baarlamaanka, waxaana ay u gogol xaaraayaan dhismaha Isbaheysi ka kooban ilaa 20-xisbi oo mucaarad ah, waxaana abaabul xoogan oo taageero looga raadinayo uu ka socdaa Yurub iyo Mareykanka.
Xubnaha fikirkan horboodaya ee isu gaashaanbuursanaya waxaa ka mid ah Musharaxiintii kala ah C/raxmaan Baadiyow, C/wali Gaas, Samatar, Cali Khaliif Galeyr iyo xubno kale, waxaana qaarkood ay dhaliilsan yihiin Xukuumada Soomaaliya, halka qaarna ay qabaan in Madaxweyne Xasan Sheekh uu balanta uga baxay, markii ay ku taageereen tartankii doorashada ee keenay inuu ku guuleysto Madaxweynenimada.
Qorshayaasha ka socda Nairobi ayaa waxaa bar bar socda hadal heyn ku aadan in isku shaandheyn lagu sameynayo Golaha Wasiirada, lana gaarsiinayo 18-wasiir, si meesha looga saaro mucaaradada socda iyo dhaliilaha taagan.
Dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda Nairobi waxaa dhinac socda mooshin culus oo ka dhan ah Xukuumada uu hogaaminayo Ra’iisul Wasaare Saacid, kaasoo ilaa iyo hada si qarsoodi ah u saxiixeen ilaa 70-Xildhibaano oo fasax ku jooga Nairobi, waxaana qolooyinkan ay kala wataan dano badan oo isugu jira 1-Qolo dooneysa in Saacid la rido 2-Qolo rabta marka la tuuro xilkiisa, 3-Qolo Wasiiro dooneysa, intaas waa isku dan.
Guux siyaasadeedka ka jira Nairobi ayaa aad looga hadal hayaa Magaalada Muqdisho, iyadoo bisha Maarso marka uu furmo kalfadhiga Baarlamaanka lagu wado in xubnaha abaabulka wada inay la soo shirtagaan qorshahooda ay ku kar-karinayaan magaalada Nairobi.
QM oo shaaciyey inaysan Ciiddamo Nabad-ilaalin u soo dirin karin dalka Somalia
Arday Soomaali iyo kuwo Maraykan oo uu dagaal dhex maray